Mon, Nov 18, 2019 at 6:56pm
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव भारतमा ! #आहा खबर# नेपाली भूमि अतिक्रमणः नेपाल–भारत सम्बन्धमा बाधक #आहा खबर# अमेरिकाको अहिलेको अडानमा शिखरवार्ताका लागि उत्तर कोरिया ‘अनिच्छुक’ #आहा खबर# मंगलबार भुटानमा नेपालको ‘होम म्याच’, हराउला त कुवेतलाई ? #आहा खबर# विद्युत् नियमन आयोगले ल्यायो नयाँ महशुल निर्देशिका #आहा खबर# तीन वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा सडक र पुलको पहुँच पुर्याइन्छः मुख्यमन्त्री राई #आहा खबर# सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग, अर्थले छुट्यायो १० अर्ब बजेट #आहा खबर# सेना मृत्यु प्रकरण : ढकाललाई पाँच दिन हिरासतमा राखिने #आहा खबर# गुट्खामा ३६ करोडको राजश्व छली, छ विरुद्ध मुद्दा #आहा खबर# वाम गठबन्धन काग र कोइली जस्तो : नेता सिटौला #आहा खबर# सेनेटरी प्याड निस्कने मेसिन जडान, छात्रालाई सहज #आहा खबर# सीमा विवाद चर्किंदै गर्दा भारतले पठायो श्यामशरण ! #आहा खबर# रूसद्वारा क्रिमिया क्षेत्रबाट कब्जामा लिएका यूक्रेनी पानीजहाज फिर्ता #आहा खबर# नेमकिपाका वडाध्यक्षको उम्मेदवारसहित अन्य नेता नेकपामा प्रवेश #आहा खबर# चिसोका कारण रुघाखोकीले सतायो ? घरमै यसरी गर्न सकिन्छ उपचार #आहा खबर#
बिहिवार, १९ आषाढ २०७६,	आहाखबर	16.93K
काठमाडौँ, १९ असार ।
सीतापाइलाकी सीता महर्जन (नाम परिर्वन) स्कुटीमा धोबीघाटतर्फ जाँदै थिइन् । कलंकीमा एक महिलाले लिफ्ट मागिन् । स्कुटर रोकिन् । चढाएर गन्तव्यमा पुर्‍याइन् । खुसी हुँदै ती महिलाले महर्जनको कुममा धाप मारिन् । ‘थ्यांकस्’ भन्दै आफ्नो बाटो लागिन् । उनी जब कार्यालय पुगिन् तब, बाटोमा लिफ्ट लिएकी महिलाले धाप मारेको ठाउँमा अनायसै दुखेको महसुस गरिन् । सञ्चार माध्यम ‘सिरिन्ज आक्रमण’ ले रंगिएका थिए । अब उनलाई पनि लाग्न थाल्यो, ‘धाप मार्ने महिलाले सिरिन्ज आक्रमण त गरिनन् ?’ बेचैन ह्वात्तै बढ्यो । कुम दुखेको महसुस अझ ज्यादा भयो । आत्तिएकी उनी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल पुगिन् । अहिले उनी एचआइभीको ‘एन्डी टोड’ लिइरहेकी छिन् ।
नयाँ बानेश्वरकी विमला श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) एनएसी (नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन) अघिबाट टेम्पु चढिन् । उनीसँगै थिए एक अपरिचित युवक । टेम्पु गन्तव्यतर्फ बढ्दै थियो । चालकले अचानक ब्रेक दबाए । टेम्पुभित्रका यात्रु एकआपसमा ठोक्किन पुगे । गन्तव्यमा पुगेपछि विमला टेम्पुबाट झरिन् । सरासर घर लागिन् । केही बेरपछि टेम्पुमा युवा ठोक्किएको शरीरतर्फको भाग दुखेको महसुस गरिन् । उनलाई पनि लाग्न थाल्यो, ‘टेम्पुमा ठोक्किएका ती युवाले कतै सिरिन्ज आक्रमण त गरेन ?’ मनमा बेचैन बढ्यो । शरीर अझ दुखेझैँ भयो । हुर्रिंदै उनी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल पुगिन् । अहिले उनी पनि एचआइभीको ‘एन्डी टोड’ लिइरहेकी छिन् ।
कीर्तिपुरमा तीन दिनअघि मैया महर्जन (नाम परिवर्तन) बारीमा मकै गोड्दै थिइन् । मकैको पातले उनको पाखुरा पाछ्यो । काम सकेर बारीबाट उनी बाहिरिइन् । सडकमा हिँड्दै गर्दा एक युवा उनको पाखुरामा ठोक्किन आइपुगे । ठोक्किएको ठाउँमा दुखेको महसुस भयो । अब उनलाई पनि लाग्न थाल्यो, ‘ठोक्किने ती युवाले सिरिन्ज आक्रमण त गरेन ?’ उनी पनि टेकु अस्पताल गइन् र एचआइभीको ‘एन्टी टोड’ लिइन् । उपत्यकाको अपराध अनुसन्धान गर्ने महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले वास्तविकभन्दा पनि मनमा कल्पित आक्रमणको त्रासबाट उपत्यकाका स्थानीय ज्यादा त्रसित बन्न पुगेको बताए ।
सिरिन्ज आक्रमणका १० उजुरी
महाशाखाका अनुसार केही सातायता सिरिन्जभन्दा पनि सिरिन्जको मनोत्रासबाट संक्रमितहरूको उजुरी प्रहरीमा धेरै परेका छन् । १० भन्दा धेरै उजुरी आएको महाशाखाले जानकारी दिएको
समाचार नयाँ पत्रिकामा छ ।
सिरिन्ज आक्रमण मनको बाघ
डा. शेरबहादुर पुनविशेषज्ञ सरुवा रोग, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल
सिरिन्ज आक्रमण भयो भन्दै दैनिक तीन–चारजना आउने गरेका छन् । अहिलेसम्म १० भन्दा धेरै यस्ता केस अस्पतालमा आएका छन् । आक्रमण भयो भन्दै आएपछि हामीले बिरामी हेर्नु कर्तव्य हो । केही छैन भनेर सम्झायो, पुनः ओल्टाई–पल्टाइ हेर्न लगाउँछन् । अचम्म–अचम्मका केस आएका छन् । सिरिन्ज आक्रमणभन्दा पनि मनमा पैदा भएको त्रास मात्र भेटियो । कतिलाई काउन्सिलिङ गरेर पठाएका छौँ । कतिलाई भने आवश्यकता हेरी सोहीअनुसारको औषधि पनि दिएका छौँ ।
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव भारतमा !
मंगलबार भुटानमा नेपालको ‘होम म्याच’, हराउला त कुवेतलाई ?